ကြေညာချက် - Beihai Wetland Scenic Area
မွနျမာစာသားကို 中文版 English
မ၏ အကြမ်းဖျင်း အခြေအနေ
စိမ့်မြေကို အကြမ်းဖျင်း မိတ်ဆက် စိမ့်မြေ ယဉ်ကျေးမှု စိမ့်မြေ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေး ကုမ္ပဏီကို အကြမ်းဖျင်း မိတ်ဆက်
တိုင်းရင်းသား ရင်ပြင် နံပါတ် ၁ ဆိပ်ခံတံတား နံပါတ် ၂ ဆိပ်ခံတံတား နံပါတ် ၃ ဆိပ်ခံတံတား နံပါတ် ၄ ဆိပ်ခံတံတား
ကြေညာချက် သတင်း ဗဟို မီဒီယာမှ တင်ဆက်
လည်ပတ်ရာ ကစားနည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လမ်းညွှန် အနီးတဝိုက်မှ စားကောင်းသောက်ဖွယ် လည်ပတ်ရာတွင် သတိပြုရန် ဒေသထွက်ကုန်
ဝန်ထမ်း ခေါ်ယူခြင်း အနာဂတ် အစီအစဉ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ် အွန်လိုင်းတွင် စုံစမ်းခြင်း
လက်မှတ် ကြိုမှာ တည်းခိုးရန် ကြိုမှာ စားကောင်းသောက်ဖွယ် ကြိုမှာ
ထိန်ချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေအရပ်(Wetland) မူပိုင်滇ICP备17005540号-1
ဝက်ဆိုဒ် တည်ဆောက်ရာတွင် ပံ့ပိုးသူ။：ထန်းတုကွန်ရက်
Share with Wechat Friends Circle
Open the Wechat and click "Discovery" at the bottom.
Use "Sweep" to share the web pages into the circle of friends.
အသေးစိတျ→ ထိန်ချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေ ဆန်းကြယ် စိမ့်မြေ ရှုခင်းဇုန် လက်မှတ်ဈေးနှုန်း ပြင်ဆင်သော ကြေညာ
တောက်ပ ယူနန် ထိန်းချုံး ဆန်းကြယ် စိမ့်မြေ ရှုခင်းဇုန် အစီအစဉ်သစ် လုံးပေါင်း ဖန်တီးခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ရှုခင်းဇုန်မှ ကုန်ပစ္စည်း၏ ပတ်ကေ့ခ်ျ ပုံစံ အဆက်မပြတ် များလာစေရန်၊ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ယခု ရှုခင်းဇုန် လက်မှတ်စနစ်ကို အောက်ပါအတိုင်းြေ
အသေးစိတျ→ ငှက်မြီး သစ်ခွ ပွင့်ချိန်၊ သင်္ချိုင်း ကန်တော့ပွဲမှာ စိမ့်မြေသို့ အခမဲ့ လည်ပတ်။
ငှက်မြီး သစ်ခွ ပွင့်ချိန်၊ သင်္ချိုင်း ကန်တော့ပွဲမှာ စိမ့်မြေသို့ အခမဲ့ လည်ပတ်။အချိန်။ ၂၀၁၄ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ ရက် မှ ဧပြီလ ၇ ရက်ထိနေရာ။ ထိန်းချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေ ရှုခင်းဇုန်【ပေးဟိုင် စိမ့်မြေ ဈေးလျှော့နေပြီနော်！！！】(၁) ဧပြီလ ၅ ရက် မှ ၇ ရက်ထိ ထိန်းချုံး ပေးဟိုင
အသေးစိတျ→ ၂၀၁၄ခုနှစ် ထိန်ချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ပွဲတော်
၂၀၁၄ခုနှစ် ထိန်ချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ပွဲတော်၂၀၁၄ခုနှစ် ထိန်ချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ပွဲတော်ကို ၂၀၁၄ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ ထိန်ချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေ ရှုခင်းဇုန်တွင် ခမ်းနားစွာ ကျင်းပခဲ့သည်။ ဤပွဲတော်ကို ထိန်ခ
အသေးစိတျ→ ထိန်ချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၅ ရက်မှ မေလ ၁၀ ရက်ထိ “ငှက်မြီး သစ်ခွ ပွဲတော်” --- ငှက်မြီး သစ်ခွ ဖဲကြိုး ပန်းပူဇော် ဆုတောင်း
ငှက်မြီး သစ်ခွ၏ ပွင့်ဖတ်သည် ငှက်၏ အမြီးနှင့် တူသဖြင့် အမည်ရလာသည်။ ပန်းနတ်သမီး Iris ၏ အမည်ဖြင့် အမည်ပေးခံရသည်။ အိုင်းရစ်စ်သည် ဂရိနတ်ပုံပြင်ထဲတွင် သက်တံ့ နတ်သမီး ဖြစ်သည်။ သူသည် နတ်များ နှင့် လူ့ပြည်အကြား သံတမန် ဖြစ်သည်။ သူ၏ အဓိက တာဝန်မှာ စိတ်ရင်းကောင်းသူ သေ
အသေးစိတျ→ ထိန်းချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေ “ငှက်မြီး သစ်ခွ ပွဲတော်”
ထိန်းချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေတွင် “ငှက်မြီး သစ်ခွ ပွဲတော်” ကျင်းပကြီးမှူးကျင်းပ။ ထိန်ချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေ ၂၀၁၅ခုနှစ် ထိန်ချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေ “ငှက်မြီး သစ်ခွ ပွဲတော်”ကို ၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၅ ရက်မှ မေလ ၁၀ ရက်ထိ ထိန်ချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေ ရှုခင်းဇုန်တွင
စိမ့်မြေကို အကြမ်းဖျင်း မိတ်ဆက်
စိမ့်မြေ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေး
ကုမ္ပဏီကို အကြမ်းဖျင်း မိတ်ဆက်
နံပါတ် ၁ ဆိပ်ခံတံတား
နံပါတ် ၂ ဆိပ်ခံတံတား
နံပါတ် ၃ ဆိပ်ခံတံတား
နံပါတ် ၄ ဆိပ်ခံတံတား
Wechat အများဖတ် အကောင့်
လိပျစာ။ ယူနန်ပြည်နယ် ထိန်ချုံးမြို့ ပေးဟိုင်ကျေးရွာ ပေးဟိုင် စိမ့်မြေရှုခင်းဇုန်
ထိန်ချုံး ပေးဟိုင် စိမ့်မြေအရပ်(Wetland) မူပိုင်滇ICP备17005540号-1 ဝက်ဆိုဒ် တည်ဆောက်ရာတွင် ပံ့ပိုးသူ။ ထန်းတုကွန်ရက်
Visitor reception in scenic spots in the next three days
Expected tourist reception in scenic spots